Chokwadi chinonakidza nezveGerman
Jerimani ndiyo nyika inofanirwa kuzivikanwa nenhoroondo yayo refu uye nemikana yemhando yepamusoro. Ichowo chimwe chevatorwa vanogamuchira nyika muEurope, sezvo vadzidzi vachigona kugamuchira dzidzo nekupa vadzidzi mamiriro akakodzera ehupenyu pamwe nehunhu.
Nenyaya yakanzi Inonakidza Ruzivo NezveGerman, tinoda kutaura nezveGerman nezvayo zvakasiyana izvo vanhu vazhinji vasingazive, pachinzvimbo chekuita sumo yakajairika nezveGerman.
Germany ndiyo Nyika yeVafungi, vadetembi uye maartist
Isu takataura kuti Germany ine nhoroondo refu. Nyika, iyo yakagara nevazhinji masayendisiti, mafilosofi, vadetembi uye maartist kubva kare kusvika parizvino, ine guta remitambo, miziyamu, raibhurari, chivakwa cheorchestra uye dzimba dzehunyanzvi dzinokosha pasi rese. Vanyori vanozivikanwa vakaita saBeethoven, Wagner, Bach, uye Brahms vakaita chinzvimbo mukukwira kwemimhanzi yechinyakare munyika. Vafungi vazhinji vakaita saKarl Marx, Nietzsche naHegel vaunza hupenyu munyika nemafambiro avo efilosofi.
Iyo nyika inoitirwa mutambo wepasi rose wevanhu
Mutambo weOktoberfest, iwo mutambo wepasirese wepasi rose, unoitwa nguva zhinji gore rega rega muguta remunyika reMunich. Mutambo uyu, uyo wanga uchienderera mberi pasina chinomira kubvira 1810, unotanga muvhiki rekupedzisira raGunyana uye unopera muvhiki rekutanga raGumiguru.
Nyika ine Cathedral Yakareba Kwenyika
Jerimani inogamuchira vashanyi vazhinji gore rega rega neyekugadzirwa kwayo kwejometri Imwe yenzvimbo dzinowanzo shanyirwa nevashanyi ndeye Cologne Cathedral, kereke yepamusoro-soro pasirese, iine kureba kwemamita 161 nematanho 768.
Nyika ine yakawanda yeNobel Prize
Jerimani akafanirwa neMibayiro yaNobel 102 muzvizere muminda yezvinyorwa, fizikisi, kemesitiri nerunyararo. Izvi zvinoratidza kukwirira uye kufarira zvese sainzi uye hunyanzvi nyika iri chaizvo. Ichokwadi chekuti masayendisiti makumi mana nemana akapihwa Mubairo weNobel munyika akadzidziswa ndiyo muenzaniso wakanaka weizvi.
Shamwari dzinodikanwa, tinoda kukuzivisai nezvezvimwe zvirimo pane yedu saiti, kunze kwenyaya yawakaverenga, pane zvakare misoro yakaita seinotevera pane yedu saiti, uye iyi ndiyo misoro inofanirwa kuziva vadzidzi veGerman.
Shamwari dzinodikanwa, ndinokutendai nekufarira kwenyu webhusaiti yedu, tinokushuvirai kubudirira muzvidzidzo zvenyu zveGerman.
Kana paine musoro wenyaya waunoda kuwona pane yedu saiti, unogona kuudza izvozvo kwatiri nekunyora munzvimbo yemaforamu.
Saizvozvo, iwe unogona kunyora chero mimwe mibvunzo, maonero, mazano uye ese marudzi ekushoropodza nezve yedu nzira yekudzidzisa chiGerman, edu eGerman zvidzidzo uye yedu saiti munzvimbo yeforum.
Kosi yemitauro uye mitauro yechikoro mitengo kuGerman
Nhoroondo yeGermany, nzvimbo, Germany…
Kudzidza chiGerman kuGerman
Zvakanakira Kuwana Mutauro Dzidzo kuGerman
Maitiro ekunyorera kweGerman mudzidzi vhiza?
Zano reGerman Kosi muBerlin
Zano reGerman Kosi muMunich
Wepamusoro gumi Gwaro Rinodiwa kune Wese kuGerman Visa Kunyorera
Nzvimbo dzekushanyira kuGerman
Hupenyu hwevana kuGerman